Manomeza voninahitra ny tany 9 Lite any Espana miaraka amin'ny vidiny sy fanomezana tsara | Vaovao momba ny gadget
Manomeza voninahitra ny tany 9 Lite any Espana miaraka amin'ny vidiny lafo sy fanomezana
Honor, marika faharoa an'ny Huawei, dia efa niasa tany Espana efa ela. Herinandro vitsivitsy lasa izay dia natolotro teo amin'ny fiaraha-monina ny Honor 9 Lite, kinova tsy misy vitamina kokoa noho ny maodely voalohany nefa mbola tena mahaliana. Ary koa, Efa azonao atao ny mividy an'ity maodely ity any Espana ary amin'ny vidiny ambany noho ny 250 euro.
Honor dia orinasa iray manolotra fantsona any afovoany afovoany misy endriny tena mahaliana ary ambonin'izany rehetra izany dia misy vidiny tena manintona. Ny Hajao 9 Lite dia ohatra iray amin'izany ary azonao atao amin'ny mpivarotra mpanamboatra iray any Espana ihany io. Ary koa, raha mihazona ny terminal ianao, misy boaty fanomezana apetaka.
Hanombohana azy, ity Honor 9 Lite dia terminal misy 5,65-inch diagonal habe, vahaolana Full HD + (2160x1080p) ary endrika 18: 9. Ary koa, ao anatiny dia hanana processeur HiSilicon Kirin 659 miisa valo fototra sy 3 GB RAM izahay, ary koa toerana iray hitahirizana rakitra 32 GB. Mazava ho azy, azonao atao ny mampiasa karatra microSD hatramin'ny 256 GB farafaharatsiny.
Mandritra izany fotoana izany, eo an-damosinao hanana fakan-tsary indroa misy sensor 13 sy 2 megapixel izahay, ary koa eo anoloana dia hanana fakantsary indroa miiba 13 sy 2 megapixel. Azonao atao ny milalao ny halalin'ny fakana azy amin'ny lafiny roa.
Toy ny mahazatra dia miasa eo ambanin'ny Android sy ny terminal terminal Honor Ity Honor 9 Lite ity dia manana ny kinova farany amin'ny sehatra napetraka: Android 8.0 Oreo. Mazava ho azy, ho eo ambanin'ny sosona EMUI 8.0 manokana izy io. Inona no fahaizan'ny baterinao? Manam-bintana ianao satria ny terminal dia misy milina 3.750 milliamp, tarehimarika mihoatra ny ampy hahatratra ny faran'ny andro miaraka amin'ny enta-mavesatra ampy.
Ny Honor 9 Lite dia hita amin'ny alokaloka roa samihafa: manga na mainty. Ary ny vidiny hahitanao azy dia amin'ny 229 euros. Ary koa, ho tolotra fanombohana, napetraka ny Honor boaty fanomezana izay anampiana kitay selfie ary headphone sasany. Na dia asehon'izy ireo avy amin'ny tranokalany aza, voafetra ho an'ireo singa 300 voalohany io tolotra io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Manomeza voninahitra ny tany 9 Lite any Espana miaraka amin'ny vidiny lafo sy fanomezana
Ireo no Motorola rehetra izay havaozina amin'ny Android Oreo